Miyaynu haysannaa Microstation-ka Mac? - Geofumadas
Dhowr sano ka hor, AutoDesk ayaa nagu yaabisay iyada ku noqo Mac; Inkasta oo aanay weli ahayn gawaarid dhammaystiran oo waxoogaa shaqeynaya, waxaan fahamsanahay isbeddel calaamadeysan oo ku wajahan qaybta la yaqaan muddo wakhti la doortay.
In Bentley uu ku laabto Mac waxay ahayd rajo in sanadihii u dambeeyay soo muuqanayay. Hadda, markay arkeen in Bentley uu bilaabay Bentley Navigator iyo ProjectWise oo loogu talagalay mac muddo ku dhow hal sano, waxay mar kale xiisaysa xiisaha haddii aan arki doonno nooca desktop-ka oo si caadi ah ula socda Manzanita. Greg Bentley si gaar ah ayuu ugu qeexay maalinta koowaad ee Maalinta Jirdilka Media, kuwaas oo u maleynaya in ay codsiyadaas dib u casriyeynayaan oo ay naga dhigtay inaan wax badan dareemeyno marka aan arko ciyaaryahankii ugu horeeyay ee ku shaqeynayay Android inkastoo ujeedooyin dheeraad ah u yeeshay garoonka dhismaha.
Maanta waa Keynotes day, goor dhow waxaan yeelan doonnaa Greg Bentley oo hal-ku-dheggiisu yahay "Si xariifnimo leh u shaqeynaya: Is-beddelka dhaqdhaqaaqa macluumaadka." Waxaan ka warqabnaa in codsiyada moobiilku yihiin kuwo aan dib-u-soo-noqosho lahayn, dhul-dhisid lagu dabaqay wax kasta, oo ay ku jiraan geomarketing waa qayb aad u xiiso badan.
Laakiin uma maleynayo sidaas, feker ahaanteyda ma arki doonno nooc ka mid ah Microstation-ka Mac. Bentley wuxuu leeyahay qaab aad u calaamadeysan oo Microsoft ah si looga fikiro Apple; laakiin maadaama maalintu yartahay, waxaan hubin doonaa jawaab ka sii saxsan.
Si dhaqsi ah u raacdo munaasabadda ma siinayso maqaalad balaadhan, hubin caddayn iyo waqti dheeraad ah oo aan ku dhammaystiri karo wakhtigayga waqtiga firaaqada ah.
Post Previous" Hore Warbixin kooban ku Media Day Xog la waxyoonay
Post Next I-model, ku noqo tayoNext »